Imigaqo emi-6 yegolide yokuDiza ikhitshi lakho - Ukulungiselela
Ikhaya Lonke: Igumbi Lokugqibela Lokuhlamba
Imigaqo emi-6 yegolide yokuDiza ikhitshi lakho
Ikhitshi elicocekileyo nelingena-clutter ngenene liphupha langaphakathi. Kukangaphi usiya ekhitshini lomhlobo wakho uzibone uzibuza ukuba 'bayigcina njani emhlabeni ngoluhlobo ?!'
Nangona kunjalo, kuninzi lwethu, inyani yahlukile-indawo yethu yasekhitshini igcwele izinto zombane, amawaka eekomityi asincinithe xa sivula ikhabhathi kunye neziqholo - masingayi nalapho.
Akunyanzelekanga ukuba kubenjalo. Ukulungisa ikhitshi lakho kwimeko nje yokusebenza kunye nokunyaniseka, utsho UVicky Silverthorn , umchasi-chwephesha onobuchule ojolise ekuncedeni abantu ukuba benze iindawo zokuzonwabisa nezolungelelwano ngakumbi. Nayi imigaqo yakhe yegolide yokwenza ikhitshi elingadibananga…
1. Cinga ngento oyenza rhoqo.
Ikhitshi lakho kufuneka likusebenzele, hayi enye indlela. Ukubeka izinto ezingasetyenziswanga rhoqo embindini wekhawuntara, kodwa kufuneka undwendwele iikhabhathi ezahlukeneyo kunye needrowa macala onke ekhitshini ukwenza ikomityi yeti ayisiyonto isebenzayo kwindawo yakho.
Endaweni yoko, lungisa nantoni na ongayisebenzisiyo kude kude (okanye, ukuba ayikaze isetyenziswe, yilahle), kwaye ujonge ukulungisa ikhitshi lakho kwimisebenzi yakho yesiqhelo. Umzekelo, unokwenza isitishi seti, apho iiggs, iibhegi zeti, iketile kunye neetispuni zonke zikwindawo enye.
2. Musa ukuba neziphala ezingapheliyo.
Nyaniseka - ngaba uzigcinele izitya ezaneleyo kunye nezinto zokusika ukulungiselela usapho olunabantu abali-15, kanti enyanisweni xa ninobane kuphela?
Uninzi lwabantu luneemgs ezininzi, iipleyiti, iipuni njalo njalo kunoko bezidinga, kodwa siyasokola ukuzisusa ezi zinto njengoko sizithatha 'ziluncedo.'
Ngokwenyani, yonke into oyifunayo ekhitshini lakho yanele isidlo sangokuhlwa yonke imihla nosapho, kunye neepara ezimbalwa xa kunokubakho ukophuka okanye iindwendwe.
Uninzi lwethu lunokonwaba ngesiqingatha semiggs esinayo, umzekelo, kwaye singaze siswele ikomityi.
'Kodwa kuthekani ukuba ndinetheko?' sisizathu esivakalayo xa kufikwa kumba wokulahla ezinye iipleyiti okanye iiglasi.
Impendulo kukuboleka kubamelwane bakho-abantu bayathanda ukwenza isenzo esihle-okanye ukuthenga iinguqulelo ezinokuphinda zisebenze ezinokuphinda zisebenze, ezingayi kuhlanganisa ikhitshi lakho kwiinyanga okanye kwiminyaka phakathi kwesoda.
Izipho zeediy zekrisimesi
3.Beka ukutya ukuze ukwazi ukubona oko unayo.
Sonke sinamava kwimeko apho uthenga lonke iqela lezithako ezintsha zeresiphi, kuphela kukuqonda kamva ukuba ubunezinto ezininzi kwikhabhathi yakho.
Ukulungisa ukutya kwakho ukuze ubone ukuba unayo le nto kubalulekile ekunciphiseni ukumoshwa kokutya- oko kuthetha ukuba awuzukuhlala uthenga into enye kwivenkile enkulu. Akukho sidingo sokuthabatheka yiyo, kodwa isenzo esilula njengokulungisa iikhabhathi zakho ukuze iitoti zijonge ngaphambili zihambe indlela ende yokwenza ubomi bakho bube lula.
Ngaba unezinto ezinjengepasta okanye irayisi eziqala ukutshiza kuyo yonke ikhabhathi ngokukhawuleza nje emva kokuba uzibambile? Ukuzibeka ndawonye ezi zinto kubhasikidi ococekileyo (TK Maxx unokukhetha okuhle) kuthetha ukuba ungabakhupha ngokulula, kunokuba wenze ukungcola. Iibhasikithi zikwalungile kwiziqholo ekhabhathini - endaweni yokubaleka ngokukhetha iziqholo kwaye ucaphuka ngakumbi, bamba ibhasikiti kwaye uskene ngokukhawuleza ukonga ixesha kunye nomzamo.
4. Yenza izinto apho ubeka khona izinto.
Ukucinga ngokwenyani ayisiyonto yokwenza imisebenzi yakho yasekhitshini ibe lula; Ikwa malunga nokuhambisa izinto zakho ezingasetyenziswanga ngokufanelekileyo ngokufanelekileyo.
Ukuba into inzima, umzekelo, qiniseka ukuba uyibeka kwindawo ephantsi, kungenjalo ngekhe uphinde uzihluphe ukuyikhupha kwakhona kuba usoyika ukuyiwisa.
Kwangokunjalo, izinto ophuma kuzo ukuya kumnyhadala othile- yithi posh cutlery yesidlo sangokuhlwa-kufuneka ibekwe kwibhokisi enelebhile ecacileyo kwaye ifakwe kwikhabhathi, ilungele ukususwa kwimeko engaqhelekanga efunekayo.
5. Qinisekisa ukugcinwa kwakho kusebenza ngeyona ndlela ibhetele.
Isilumkiso: ungachitha ixesha elininzi ekhitshini ukuba awuzenzi ezishelufa zinokuhanjiswa.
Ukuba, umzekelo, uneshelufu yeetoti enendawo enkulu yokushiya ngaphezulu kwazo, cinga ukongeza ishelufu entsha okanye uzihambise ukuze wenze indawo yokugcina ngaphakathi kwiikhabhathi zakho zasekhitshini.
Unokongeza ukuya kuthi ga kwi-50% yendawo yokugcina ekhabhathini ngokulula ngokusebenzisa ubeko ngokufanelekileyo, kodwa uninzi lwethu luthanda ukubambelela kwindlela esizidibanisa ngayo izinto xa siqala ukungena endlwini.
6. Cinga ngokoqobo, hayi mhle.
Kulula kakhulu ukuqhutywa bubuhle kwaye ulibale ukuqaphela ukuba isisombululo sokugcina sisengqiqweni kangakanani.
Thatha iingqayi zeKilner, umzekelo-zikhangeleka zintle zibekwe kwindawo ebanzi, kodwa zaphoswa kwikhabhathi yakho yasekhitshini, ngokwenyani zithatha igumbi elininzi ngenxa yemilo egobile kunye neziciko zeglasi.
Ukutya okutyayo kuya kuza nobunzima obuninzi- unokuba nomgubo ongaphezulu okanye irayisi kunokulingana esityeni, ikushiye unengxaki yokugcina okushiyekileyo, kwaye ngandlela thile kuya kufuneka urekhode ukusetyenziswa-komhla wokutya ngakunye okufunwayo .
Endaweni yoko, cinga ngokusebenzayo, nokuba ugcina iimveliso zakho kwiipakethi zazo kwaye utyale imali kwiibhasikithi ukuze uqokelele izinto kunye okanye, ukuba ukhetha indlela yokugqiba, uthenge izimbiza zesikwere ukuze usebenzise indawo ngokufanelekileyo.
Isuka: Ukugcinwa kakuhle kweNdlu e-UK
Uyilo lomngxunya wesinyithi
eyakhiwe kwizihlalo zefestile
ukubuyisela ipani yentsimbi